पर्यटनमा कोरोनाको प्रभाव : मासिक अर्बौको क्षति, २० लाख जनशक्ति प्रभावित ! - Shikhar Post Shikhar Post
पर्यटनमा कोरोनाको प्रभाव : मासिक अर्बौको क्षति, २० लाख जनशक्ति प्रभावित !
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । भाइरस फैलने डरले नेपाल सहित विभिन्न मुलुकले लकडाउन गरेपछि सबै पर्यटकीय गतिविधिहरु ठप्प छ । व्यवसाय चौपट भएको भन्दै व्यवसायीहरुले संरक्षणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार कोरोनाले बढी प्रभावित मध्येको एक होटल क्षेत्रमा मासिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घाटा छ । त्यस्तै एयरलाइन्स क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ । पर्यटक आगमन नहुँदा अन्य पर्यटकीय कम्पनीहरु ट्रेकिङ, ट्राभल, र्याफटिङ सहित पथप्रदर्शकहरु पनि निकै मर्कामा छन् ।व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंकको ऋणको व्याज, साँवा भुक्तानी र कर्मचारीलाई तबल खुवाउन समस्या भएको छ । सोही कारण विगत लामो समय देखि व्यवसायीहरुले साँवा, व्याज भुक्तानीका सहुलियतको माग गर्दै आएका थिए ।
पर्यटनमा आश्रित २० लाख बढी प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको बताइएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सृजना राणाले लाखौले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको । व्यवसायको संरक्षणसँगै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुश्किल भएको बताइन । पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले छुट्टै राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ।
उसो त नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि २० अर्ब रुपैयाँको प्याकेज आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । बोर्डले लकडाउन खुलेपछि पर्यटनमा बेरोजगार बनेका १८ सय जनशक्तिलाई रोजगारी दिने तयारी पनि गरेको छ । त्यसका लागि युएनडीपीसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, २० बैशाख २०७७ ०८:३४